कसरी अण्डा बनाउने | ThermoRecines
Desayuno13 मिनेट2 व्यक्ति60२ क्यालोरी
को अण्डाहरू, अण्डा जस्तै शिकार, यो अण्डा तयार गर्न को लागी एक धेरै चाखलाग्दो तरीका हो। सबै भन्दा पहिले, हामी पक्ष छ सौन्दर्य, जुन अधिक मूल र आश्चर्यजनक हो र, दोस्रोमा, हामीसँग छ पौष्टिक किनकि उनीहरूसँग कम क्यालोरी ईन्ट्याक छ यदि हामीले उदाहरणका लागि उनीहरूलाई भाले बनायौं भने।
पोच गरिएको वा पोच गरिएको अण्डालाई प्लास्टिकको र्यापमा बेर्ने पकाइन्छ, टोकरीमा पानीमा डुबाउँछ वा भेरोमा कन्टेनरमा वाफ गरिन्छ। यहाँ तपाईंसँग एक पछि अर्को चरण छ ताकि तपाईं उनीहरूलाई घरमा धेरै साधारण तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई अभ्यासमा राख्नको लागि यहाँ केहि सल्लाह विधिहरू छन्:
राटाटुइले र पोच अण्डाको साथ चामल
होममेड मसलेको आलुमा फोइको साथ अण्डो फोर्नु
पोच अण्डाको साथ पुदीना संग मटर क्रीम
1 कसरी पोच अण्डा बनाउने (चरण-देखि)
थर्मोमिक्समा पोच गरिएको अण्डाको तयारीको चरणबद्ध फोटोग्राफिक चरण। सजिलो, छिटो, आकर्षक र कम फ्याट डाईटहरूको लागि उत्तम।
तयारी समय: 8M
कुल समय: 13M
एक चुटकी तेल
सबै भन्दा पहिले, हामी पानीलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, चम्चा गति। पानी तापिरहेको बेला, हामी आफ्नो अण्डाहरू तयार पार्न जाँदैछौं।
क्लि film्ग फिल्मको वर्ग काट्नुहोस् र तेलको स्प्लास थप्नुहोस्।
हामी तेललाई ब्रशको साथ, आफ्ना औंलाहरूमा वा चम्चाको साथ राम्रोसँग फैलाउँछौं।
हामी फिल्मको वर्ग बास्केट भित्र राख्छौं र हाम्रो औंलाहरूको मद्दतले हामी त्यसलाई पर्खालहरूमा टाँसिन्छौं।
धेरै सावधानीपूर्वक, हामी अण्डा भित्र परिणत गर्छौं र एक चुटकी नुन थप्दछौं।
हामी प्लास्टिकको र्‍यापको साथ अण्डा लपेट्छौं, मोडिदै र टाई दिन्छौं। हामीले कोसिस गर्नु पर्छ कि अण्डा कागज भित्र यति ढीला छैन कि हामी एक गोल र सुन्दर आकार छ।
VAROMA कन्टेनर विकल्प: हामी हाम्रो पोच अण्डा भेरोमा कन्टेनर भित्र राख्दै छौं।
जब हामीसँग ती सबै छन्, हामी मात्र यसलाई पकाउन पर्छ। हामी गिलास र प्रोग्राममा यसको ढक्कनको साथ वरमा कन्टेनर राख्छौं Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति २.
समयको अन्त्यमा, सावधानीपूर्वक प्याकेटहरू हटाउनुहोस् र तिनीहरूलाई केही मिनेटको लागि चिसो दिनुहोस्। कैंचीको साथ, हामीले प्लास्टिकलाई काट्यौं जहाँ यो बुँदिएको छ र हाम्रो अण्डा सजिलै स्लाइड हुनेछ तेलमा धन्यवाद जुन हामीले यसलाई सुरुमा राख्यौं।
बास्केट विकल्प: अर्को विकल्प टोकरी भित्र पकाउनु हो। यो राम्रो विचार हो यदि हामी संख्या cook भन्दा बढि पकाउन जाँदैछौं यदि त्यहाँ than भन्दा बढि छन् भने, म वरोमालाई सिफारिस गर्दछु। यस अवस्थामा हामी पनि त्यस्तै गर्छौं। हामी minutes मिनेट, वरोमा तापमान, चम्चाको गति (गिलास भित्रको टोकरी सहित) को लागि १.4लिटर पानी तात्यौं। त्यसो भए हामी धेरै सावधानीपूर्वक हाम्रो अण्डाको प्याकेटहरू परिचय गराउँदछौं र minutes मिनेट, वरोमा तापमान, स्पीड २ सम्म पकाउँदछौं।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: १ 15 मिनेट भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » समयको लागि » १ 15 मिनेट भन्दा कम » कसरी पोच अण्डा बनाउने (चरण-देखि)
के अण्डाहरू भेरोमामा ब्रोथको रूपमा नै बनाउन सकिन्छ, प्यूरि वा कुनै अन्य विधि गिलासमा बनाईन्छ?
देशभक्तलाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि, पेट्री! तपाईको थर्मोमिक्सको साथ पकाउनु भएको कुनै पनि समयको फाइदा लिन यसलाई सधैं ध्यानमा राख्नु राम्रो हुन्छ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
हेम र शतावरी संग रोल